Umthandazo kuSanta Alejo. ? Ukugxotha umntu, abathandi kunye neentshaba
Umthandazo kuSan Alejo yenziwa xa kufuneka sibeke umgama phakathi kwethu nomnye umntu ngoba xa kuye kuye kwathatha isigqibo sokufuduka wayenza ngaphandle kokujonga ngasemva.
Umthandazo osizalisa amandla kwaye usinika imbonakalo yokungahlukani nabo bangasenzi kakuhle okanye odlulisela amandla amabi.
Ngendlela efanayo lo mthandazo unokwenziwa ukuba ususe ubudlelwane obuthile obungalunganga kwisalamane esisondeleyo.
Sisixhobo esisinceda sigcine ucwangco ekhaya kwaye nokholo lwethu luyonyuka mihla le
1 Ngubani uSan Alejo?
1.1 Umthandazo kwi-Saint Alexius yokugxotha umntu
1.2 Umthandazo weSan Alejo ukwahlula abantu kunye nabathandi
1.3 Ukuthintela iintshaba zethu
Ngubani uSan Alejo?
San Alejo, owayenomkhuseli ebomini Ukholo lobuKristu. Wayephila enexhala ngokufundisa abanye imigaqo esisiseko yokholo. Utshutshisiwe kwaye ulahliwe abanye kodwa ngutitshala omkhulu wabanye.
Akukho namnye owaziwayo umhla wokuzalwa kwakhe kwaye namhlanje waziwa ukuba ungomnye Abangcwele abasinceda sisombulule iimeko zobuqu ezinzima.
Indoda eyayikwazi ukushiya ubutyebi kunye nosapho ngenxa kaKristu, ukholo lwayo olungagungqiyo lwayomeleza njengoko wayehamba ezitalatweni ngaphandle kophahla okanye isibonelelo kodwa ngenjongo eqinileyo yokwandisa ubukumkani bukaThixo ngokushumayela ilizwi lakhe kubo bonke el mundo.
Wazinikezela ngakumbi abantwana, ukuze sibafundise ilizwi likaThixo ngenxa yokuluma ukutya. Umzekelo wokulandela ngothando nangokuzinikela elukholweni.
Umthandazo kwi-Saint Alexius yokugxotha umntu
Oh usikelele u-Alexius oNgcwele
Umzekelo oxabisekileyo wothando
Ukuba usebenzile wonke umntu onako ngaphandle kokulindela into ngembuyekezo
Kwaye ndikubonise ukuzinikela kwethu
Kuba ngokuthobeka kwakho, kunye nokuzinikezela, ulufumene uthando lukaThixo
Namhlanje ndiza kukubuza
Ukuba uthatha kum umntu ongafunekiyo, ondibangela kubuhlungu kakhulu
Kanye njengokuba wahamba nabazali bakho
Ukuze ndikhule ngokomoya
Phuma ebomini bam uye (igama lomntu), ukuze uphile ngoxolo
Ndifundise kancinane uthando olunike ummelwane wakho
Ukuze ufunde ukunyamezela
Kubantu abangafunekiyo, kwaye asinakuhlukanisa
Wena ungakwesokunene sikaThixo
Ndicela ukuba undixelele phambi kwamehlo akho
Ukufumana ubabalo phambi kwam
Ukwenza umntu olunge ngakumbi
Kwaye ukuze ndibusikelele ubomi bam
Kwaye ndenze ukuba ndonwabe kancinci
Kuba ukwabelana nalo mntu kukuphila okuyinyani
Ndiyabulela San Sanjo osikelelekileyo
Ngokumamela imithandazo yam
Kwaye ndinike inkxaso yakho engenamda ..
Ngaba uyawuthanda umthandazo weSan Alejo ukugxotha umntu?
Ukuhamba emntwini kunokuba, kwezinye iimeko, isenzo esinzima ukusenza kwaye kukho iimeko ezisikhokelela ekubeni sisondele kwabo bantu singabafuni.
Kungenxa yesi sizathu le nto umthandazo unamandla kuba usinceda ukuba sibe ngulo mntu usishiya ngokuzithandela.
Iyasebenza ukuba siyenza ukusinceda njengoko kunjalo kwilungu losapho, njengomntwana, ohlala esenza ubuhlobo obungalunganga kwaye, ngaphambi kokuba umonakalo ungalungelelani, kungcono ucele iSan Alejo ukuba igcine loo nto umntu
Umthandazo weSan Alejo ukwahlula abantu kunye nabathandi
San Alejo, wena unamandla okuphelisa bonke ububi obujikele abanyuliweyo beNkosi, ndicela ukuba nawe uye kude ... (Chaza igama leqabane lakho)
Ukusuka… (Ukhankanya igama lesithandwa sakhe) Ndiyakubiza, ndiyakubongoza ukuba uhambe nawe, uye ku… (Chaza igama lesithandwa sakhe) Mse (okanye) uye kummandla wokulibala, kwanga angaphinde awelele indlela ye… (Chaza igama leqabane lakho).
Njengoko imisinga yamanzi ibaleka, balekela ku ... (Chaza igama leqabane lakho) Ukusuka ... (Chaza igama lesithandwa sakho) Ngonaphakade.
Kanye njengokuba ya ... (Khankanya igama lesithandwa sakhe) Ubomi ... (Chaza igama leqabane lakho) Ukurhoxa ebomini bakhe kwangoko.
Ukuba abanakuba kunye okanye kwigumbi lokuhlala, okanye kwigumbi lokutyela, okanye etafileni yokutya, abanako ukuba nemfihlo ngaphandle kokuziva bekrwada kwaye bengathandani.
Ndiyakucela San Alejo, ukuba bafumanise ukuba ababoni, ukuba bayathetha ... (Chaza igama kwiqabane lakho) Kwaye ... (Chaza igama lesithandwa sakho) ukuba abaqondi ngokunye kwaye nokuba ukwahlukana kugqityiwe kwaye kungonaphakade. Ndicela umoya wendlela ukuba usike zonke iindlela ukusuka ... (Chaza igama leqabane lakho) Ku ... (Chaza igama lesithandwa sakho).
Enkosi San Alejo ngokuhamba kwam kwi-oda yam.
Ndicela ukubuyisela iqabane lam kwicala lam eliguqukayo, kwaye ndiyakuthembisa ukusasaza lo mthandazo kwaye ndiyabulela ngesisa esivunyelweyo!
Thandaza umthandazo weSt. Alejo ukwahlula abantu ababini abanokholo olukhulu.
Kubudlelwane bezithandani, umntu wesithathu uhlala eshiyeka. I-San Alejo isinceda ukuba sigcine imvisiswano kubudlelwane besi sibini ngaphandle kokutshintshwa ngumntu wesithathu.
Uyalazi ixabiso lokwenyani losapho kwaye yiyo loo nto esinceda sisuse abo bantu basoyikisayo ngokuchitha ikhaya lethu.
Ayinamsebenzi nokuba ngu- ulwalamano olulula okanye sele lwenzekile ubudlelwane babathandi, lo mthandazo unamandla kwaye uyasebenza.
Ukuthintela iintshaba zethu
Oyena mkhulu u-Alejo oqaqambileyo, inkosi yokuqala yase-Alexandria, musa ukundishiya ebusuku okanye ngemini, ndiyakundicenga ukuba undijonge undiyekise ezintshabeni eziza nokholo olubi kum.
Ndihlangule kwaye undigcine kumandla kaMtyholi, amadoda angendawo, izilwanyana ezinoburhalarhume kunye yamagqwirha nobugqwirha. San Alejo, San Alejo, San Alejo, kufuneka ndikubize kathathu.
Ngalo lonke ixesha ndinikelwa, ukuba undikhulule kubo bonke ububi.
Iminqamlezo emithathu ndikunika yona, olu luphawu lokuba ngumkristu olungileyo, ukohlwaya isandla solwaphulo-mthetho, kwi-villain efuna ukundenza into ephosakeleyo.
Oku kuzophula ulwimi lwabantu abafuna ukuthetha ngam.
Ndicela uSan Alejo wakho onamandla, ukuba ungandiyeki ujikeleze indlu yam kwaye yonke into esezinyaweni zam ibophelelekile. Amen NguYesu
San Alejo de León, ukuba nawuphina umntu ofuna ukundingcatsha, wanga uThixo angawavumela amaphiko akhe asuke entliziyweni yam aze azithobe kum, njengoko uYesu weza ezinyaweni zomnqamlezo.
Ukuba ufuna ukukhusela iintshaba, lo ngumthandazo ochanekileyo kwiSanta Alexius.
Kukho abo bacinga ukuba iintshaba kufuneka zisondele ukuze zibabukele, kodwa kukho iintshaba ukuba kubhetele ukuba kude kuzo, oku xa ubutshaba bu ngqo.
Kodwa kukho iimeko ezinobuzaza ngakumbi zenziwa ngabantu Yiya kubahlobo kodwa enyanisweni baziintshaba.
Kwezi meko ukuthandaza eSan Alejo kusinceda zigxothe kuthi ngokwemvelo kwaye ngaphandle kweengxaki.
Uyayazi ukuba yintoni into yokuba neentshaba zam ezisondeleyo yiyo loo nto waba yiSanta, ekuncedeni abantu bafumane uxolo nangona iimeko zethu zinzima. Ukude nosapho kunye nabahlobo akuyona into elula kodwa ngokufuthi inyanzelekile.
Saint Alexius, wena ophumeleleyo kuyo yonke into, Wena ulawula ukubona yonke into, kuyacaca kuwe ukwahlulahlula umoya wam kwaye uqaphele ukuba ubukho bam bungenalo uthando, Umgodi oyiNgcwele, ndincedise ukuhlangula uthando, Umlingane wam undilahlile kwaye kolunye / okanye okunye endaweni yam, Yenza ihemistry phakathi kwabo ikhuphe, Benze bahlale bodwa.
San Alejo, yenza uthando lwakho olwahlukileyo, Phambuka kuye / ubuye, ukuba ungafezekisi ngaphandle kwam okanye uphuphe, Ukuba ecaleni kwakho akangomntu uthandekayo, Lowo ndim apha ebomini bakho, iqhezu, kwimbono yakho nakwiminqweno yakho.
Olo thando lwalukokwam, ukuba lukhona, Lokuba umntu ongamaziyo ahlukane nobomi bakhe, Lowo mntu wayemi phakathi kwakhe kunye nam, Umele ukuba angabandakanywa nentando yakhe, San Sanjo, Olo thando lubandakanya mna.
Ndicela ukuba angabinakho ukuba naye, ukuba ubomi bakhe abuyiyo into eyam, kwaye ndiyabuya, ukuba uthando lwam luyeza, San Alejo, ndiyalifuna, Ewe yena ubaluleke kakhulu.
Ausculta imithandazo yam kunye nezibongozo zam, kwaye uyandingenela.
Lo mthandazo kuSanta Alexander wothando unamandla kakhulu!
Isidingo sokuthandwa nokuthandwa sasisoloko sisona sizathu sinamandla so imithandazo. Ukwazi ukufumana uthando nokwenza ikhaya, usapho oluzele yimvisiswano kwaye lubona abantwana bekhula ngamava obomi obuhle bonke abantu abafanelwe kukuphila.
Nangona kunjalo, uxelele abanye ngaphezulu kunabanye kwaye oku kungenxa yeenjongo ezimbi ezibonakala ngoku zichaphazela iintliziyo.
San Alejo, xa wayesemhlabeni wakwazi ukuhlala olu hlobo lothando kuba wayenosapho ngaphambi kokuzinikezela ngokupheleleyo kwinjongo kaThixo.
Kodwa uthando aluzange lufike apho kodwa lwakhula lwaza lwaguqulwa lube namandla athi ukuza kuthi ga ngoku enza imimangaliso.
Ukumcela ukuba enze ummangaliso ukuze afumane uthando lokwenyani sisenzo sokholo esiya kuhlala siphendulana ngokukhawuleza ngoba yonke into esiyicelayo kutata ngegama likaYesu, utata uzosinika.
Thatha ithuba amandla ayo yonke imithandazo yeSan Alejo!